Jobho 27 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
27 Zvino Jobho akasimudzirazve chirevo chake,+ akati: 2 “NaMwari mupenyu,+ akandibvisira kururama kwangu,+Naiye Wemasimbaose mupenyu, akashungurudza mweya wangu,+ 3 Mhepo yangu yokufema ichiri mandiri yose,Simba roupenyu raMwari richiri mumhino dzangu,+ 4 Miromo yangu haizotauri zvisina kururamaUye rurimi rwangu haruzotauri zvinonyengera! 5 Handingambofungi zvakadaro kuti nditi imi makarurama!+Handizorasi kuvimbika+ kwangu kusvikira ndafa! 6 Ndakabatisisa kururama kwangu, uye handizokuregedzi;+Mwoyo wangu hauzondishori pamazuva angu ose.+ 7 Muvengi wangu ngaave munhu akaipa munzira dzose,+Uye anondimukira ngaave munhu anoita zvakaipa. 8 Nokuti munhu anotsauka achava netariro yei kana iye akamuparadza,+Kana Mwari akamutorera mweya wake?+ 9 Mwari achanzwa kuchema kwake hereKana akawirwa nokutambudzika?+ 10 Kana kuti achafarira kwazvo Wemasimbaose here?Achashevedzera kuna Mwari nguva dzose here? 11 Ndichakurayiridzai noruoko rwaMwari;Handizovanzi zvinhu zvine Wemasimbaose.+ 12 Tarirai! Imi mose mune zvamakaratidzwa;Saka nei muchiratidza kuti hamubatsiri zvachose?+ 13 Uyu ndiwo mugove womunhu akaipa unobva kuna Mwari;+Uye vachagamuchira nhaka yevadzvinyiriri inobva kune Wemasimbaose. 14 Kana vanakomana vake vakava vazhinji, vachaurayiwa nebakatwa;+Vazukuru vake havazovi nezvokudya zvakakwana. 15 Vanopona vake vachavigwa munguva yedenda rinouraya,Uye chirikadzi dzavo hadzizosvimhi misodzi.+ 16 Kunyange akaunganidza sirivha seguruva,Akagadzira zvipfeko zvakaita sevhu, 17 Angagadzira hake, asi munhu akarurama ndiye achazvipfeka,+Uye asina mhosva ndiye achawana mugove wesirivha yacho. 18 Anovaka imba yake sezvinoita chitemamachira,Uye sedumba+ rakagadzirwa nomurindi. 19 Acharara pasi akapfuma, asi hapana chichaunganidzwa;Achasvinudza maziso ake, asi pachange pasina chiripo.+ 20 Zvinongoerekana zvavhundutsa zvichamubata semvura;+Dutu richamuba usiku. 21 Mhepo yokumabvazuva ichamutakura,+ oenda,Ichamupeperetsa ichimubvisa panzvimbo yake.+ 22 Ichavhuvhutira paari uye haizonzwi tsitsi;+Chokwadi achaedza kutiza simba rayo.+ 23 Mumwe acharovanisa maoko ake paari+Uye achamuridzira muridzo+ ari panzvimbo pake.